Nhicha Atụmatụ - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
BVC Cleaner enyemaka ị jide a Grịl-Haus ọzọ na-enweghị atụ egwu nke dị ọcha ọrụ.
Ị nwere ọtụtụ nke enyi na chọrọ iju ha, gịnị mere iju ha site mba a Grịl-Haus party? Ekwela ka gị imetosi ụlọ na-n'ụzọ nke gị na-anọkọ mgbe ụfọdụ ezigbo ndị enyi. Ebe a bụ a 5 nzọụkwụ plan-enyere gị aka ọcha n'ụlọ gị - dịghị nchegbu, dị nnọọ mfe na-nweta ihe aga-eme. Ya mere ebe-amalite? N'ihi na a Grịl-Haus ọzọ, ndị ọbịa ga-ejikarị oge ha n'èzí, ka ihe ndị kasị mkpa ọcha nọ n'ụlọ na-n'ọnụ ụzọ, ndụ ụlọ, kichin na-asa ahụ. Ọ dịghị mkpa ọcha dum ụlọ kama ilekwasị anya party ụzọ - na ọtụtụ ndị anya ga-na tebụl, shelves na ebe ka ha na-aṅụ.
Malite site atụtụ ọ bụla si ebe ihe, imezi ndina, cushions, Ohiri isi na refolding achụpụ (ukwuu n'ihi na ekpuchi elu ọ bụla stains - Otú ọ dị, ị ga-adịghị mkpa na-eme nke a mgbe iji ọ bụla nke BVC ngwaahịa). Next hichaa table, TV na ihuenyo na ndị ọzọ uzuzu uzuzu na-ebupụta site na iji a microfiber ákwà. N'ikpeazụ, agụụ ọ bụla ájá ma ọ bụ Pita ntutu n'ala, na echefula ọcha gị skirting mbadamba na-eji gị agụụ na ahịhịa ma ọ bụ sooks mgbakwunye.
4.Clean na Kitchen
First n'ókè nke agha bụ na-amalite-ekpocha gị sink nke ọ bụla ruru unyi efere; ma ọ bụrụ na i nwere a na-asacha efere dị nnọọ na-enye ha a itucha na tojupụtara ha. Mgbe ahụ, na-enye sink a ọma ihicha - ọ ga-abụ a na-enweghị ntụpọ, akachia efere mgbe ị na-mere - na BVC Cleaner ga-eme ọrụ a nnọọ mfe! Next ọcha gị counter n'elu, abịa pụọ ​​enweghị isi ngwa hichaa ihe counter ala na kichin ịgba na a microfiber ákwà ma ọ bụ disposable ekpochapụ. I nwere ike ime otu ihe ahụ gị stovu, cabinets na ngwa nju oyi. Ọ nwekwara ike ịbụ ezi echiche iji ọcha gị ngwa nju oyi n'ime ime, rearranging iji nye ohere maka appetisers, ihe ọṅụṅụ na ndị ọzọ na goodies. N'ikpeazụ, uzuoku mop n'ala iji hụ na gị na kichin bụ spick na-adịru.
5.Last ma ọ bụghị ọtụtụ ihe dị ọcha na naa nsọ
Ịhapụ ndị kasị mkpa ụlọ maka ikpeazụ - na-asa ahụ bụ ụlọ ị ga-elekwasị anya ọtụtụ n'ime gị anya. Ugbu a, nke a apụtaghị na ị na-esi ala na aka gị na ikpere na sikrob n'ala, kama, ihe nhicha ihe kasị ọbịa ga-eji dị ka ụlọ mposi, mirror, imi na counter. Malite site mbukota nile kpafuo countertop ihe n'ime cabinets ma ọ bụ n'ebe ọ bụla nke anya, ndị na-enye a na-asa, countertop na akpa nnọọ a ọma ihicha na ihe niile na-nzube Cleaner ma ọ bụ ndị BVC Cleaner. Next ọcha gị ụlọ mposi - n'ime, na oche, rim na mputa, ma hụ na ị na-eji dochie gị ẹdude mposi mpịakọta a ọhụrụ otu. Tinye ụfọdụ deodoriser ma ọ bụ a esi ísì ụtọ kandụl ike na spa mmetụta. Ọzọkwa, anaghị echefu ebe ọhụrụ, ọhụrụ na N'ụbọchị nke abụọ n'aka akwa nhicha si. N'ikpeazụ, nye na-asa n'ala a ọma uzuoku mop na ị na-niile mere.
Ọ bụ dị mfe dị ka na na anyị 5 nzọụkwụ plan - adịghị ka ihicha na-n'ụzọ nke gị party Prep oge.